ပြည်တွင်း အနုပညာရပ်ဝန်းမှ သတင်းများ - Myanmar Online Tea Shop
Welcome to Myanmar Online Tea Shop
Myanmar Online Tea Shop
Media News & Views
ပြည်တွင်း အနုပညာရပ်ဝန်းမှ သတင်းများ
Topic: ပြည်တွင်း အနုပညာရပ်ဝန်းမှ သတင်းများ (Read 19057 times)
December 21, 2012, 06:47:26 PMReply #750 Dr.Moe Z
တကယ်ဆိုရင် အမြည်းလိုတယ် ဘာကြောင့်အဲသလောက်ကြာသလဲကွယ်
Credit : 1547 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Since March 3,2009
Re: ပြည်တွင်း အနုပညာရပ်ဝန်းမှ သတင်းများ
နန်းခင်ဇေယျာ၏ ဓာတ်ပုံများအား ခွင့်ပြုချက်မရရှိသေးပဲ ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြမိသည့်အတွက် ကြေးမုံသတင်းစာ၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ အလင်းတန်းဂျာနယ် နှင့် လျှပ်တပြက် ဂျာနယ်တို့တွင် တောင်းပန်လွှာများ အမြန်ဆုံး ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုစာချုပ်။popular
December 25, 2012, 03:27:49 AMReply #751 ကိုစိုင်း
ဖြစ်ချင်တာထက်... ဖြစ်သင့်တာကိုပဲ ဦးစားပေးနေရတယ်။ :-X
-Receive: 12310Join Date: 12 Apr 2011
Credit : 8777 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Gender: မင်္ဂလာပါ။
MISS CHRISTMAS 2012MISS CHRISTAMS 2012ကိုရန်ကုန်မြို့ရှိ ချယ်ထရီရံဟိုတယ်တွင်ယနေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။Credit @ Ayeyarwaddy
AyeyarwaddyWebHost.Org for Myanmar Web Sites( Domain & Web Hosting Sales and Service )
December 28, 2012, 01:53:05 PMReply #752 kwkyaing
Credit : 3710 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Gender: အောင်မြင်ကြီးပွားတိုးတက်ကြပါစေ
ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ လက်မှတ်များ စတင်ရောင်းချရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ပြန်လည်ကျင်းပမည့် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား ကြည့်ရှုနိုင်ရန် လက်မှတ်များကို ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း ယင်းလက်မှတ် ရောင်းချသည့် နေရာများထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။ ကျပ်တစ်သောင်းမှ ကျပ်နှစ်သောင်းတန် လက်မှတ်များကို ရှေ့ဆောင် ရုပ်ရှင်ရုံ၊ Junction Square ၊ သုဝဏ္ဏအားကစားရုံ (၁)၊ တော်ဝင်စင်တာ စသည့်နေရာများတွင် ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ် ဆုပေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီတွင် သုဝဏ္ဏ အမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲရုံ (၁) တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးထံမှ သိရသည်။@The Voice Weekly
December 28, 2012, 01:55:53 PMReply #753 kwkyaing
Miss People Style Competition 2012 ဆုရရှိသူများ စင်မြင့်ထက်တွင် တွေ့ရသည့် Miss People Style Competition 2012 နောက်ဆုံးအဆင့် ပြိုင်ပွဲဝင် မော်ဒယ်လ်များMiss People 2012 Award ကို ခိုင်သဇင်ယုဝါက ရရှိသွားပါတယ်။ Miss People 2012 Runner Up - ထက်နုနုရှိန်(People's Choice Award ကိုလည်း ထက်နုနုရှိန်က ရရှိပါတယ်) People's Choice Award - ထက်နုနုရှိန်(People's Choice ဆုအတွက် SMS Voting စနစ်ဖြင့် ပေးပို့ရွေးချယ်စေခဲ့ရာ ထက်နုနုရှိန်က SMS ၁၃၇ ခု ရရှိခဲ့ပါတယ်) Best Complexion Award - Emerald Nyein Best Body Award - မိုမိုကို Best Photo Award - အင်ကြင်းထူး Best Talent Award - ဆုလေး Best Smile Award - ခင်မြန်မာ Best Personality Award - ဟန်သီ Best Designer Award - ချစ်မိုးဖြူဆုငွေ ကျပ် ၁၅ သိန်းဖြစ်ပါတယ်။Myanmar People Magazine က ကျင်းပသည့် Miss People Style Competition 2012 နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲကို ယနေ့ညပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ Traders Hotel တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ Miss People 2012 အဖြစ် မော်ဒယ်လ် ခိုင်သဇင်ယုဝါက ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ 1st Runner Up နှင့် ပရိသတ်များက SMS ပေးပို့ရွေးချယ်သော People's Choice ဆုတို့ကို ထက်နုနုရှိန်က ရရှိခဲ့သည်။ Miss People Style Competition 2012 ဆုရရှိသူများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။Miss People 2012 Award - ခိုင်သဇင်ယုဝါMiss People 2012 Runner Up - ထက်နုနုရှိန်People's Choice Award - ထက်နုနုရှိန်Best Designer Award - ချစ်မိုးဖြူBest Complexion Award - Emerald NyeinBest Body Award - မိုမိုကိုBest Photo Award - အင်ကြင်းထူးBest Talent Award - ဆုလေးBest Smile Award - ခင်မြန်မာBest Personality Award - ဟန်သီ@Myanmar People Magazine
December 31, 2012, 04:28:23 AMReply #754 ကိုစိုင်း
"၂၀၁၁ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုရသူများ"ဆုအမျိုးအစားဇာတ်ကားအမည်ဆုရရှိသူအမည်ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆုပန်းကြာဝတ်မှုန်တင်ဆန်းရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆုထာဝရအလင်းတန်းဟိန်းထက်(လယ်ဝေး)ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆုထာဝရအလင်းတန်းဇော်မျိုးထွဋ်အသံတည်းဖြတ်ဆုပန်းကြာဝတ်မှုန်စန်းဦးအမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆုထာဝရအလင်းတန်းမော့စ်အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုရင်ကွဲနာချစ်စနိုးဦးဇာတ်ညွှန်းဆုထာဝရအလင်းတန်း မြင့်ဆောင်နှင့်စိုးကျော်ဆန်း(ပူးတွဲရေးသား)အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုထာဝရအလင်းတန်းနောင်နောင်အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုထာဝရအလင်းတန်းမယ်လိုဒီအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုထာဝရအလင်းတန်းထာဝရအလင်းတန်းဇာတ်ကားထုတ်လုပ်သူဒါရိုက်တာဆုထာဝရအလင်းတန်းထွန်းအောင်ဇော်Photos @ Asian Fame Media Group
« Last Edit: December 31, 2012, 04:46:50 AM by ကိုစိုင်း »
January 02, 2013, 10:10:36 PMReply #755 ---ThE Cr0w----
Join Date: 02 May 2011
Credit : 121599 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Gender: လွတ်လပ်သော တောင်ပံခတ်သံ
တေးသီချင်း မူပိုင်ခွင့် ကိစ္စ ဂီတ အစည်းအရုံး မူဝါဒ ချမှတ်မြန်မာ နိုင်ငံ ဂီတ အစည်းအရုံး (ဗဟို) အနေဖြင့် တေးသီချင်း ဖန်တီး ထုတ်လုပ်သူ များနှင့် တေးသီးချင်း သုံးစွဲသူ များအကြား မူပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန် အတွက် အချက် ၇ ချက်ပါ မူဝါဒ ချမှတ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က သတင်း ထုတ်ပြန် ထားသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ တေးသီချင်း ဖန်တီး ထုတ်လုပ်သူများ အနေဖြင့် ငှါးရမ်း အသုံး မပြုစေလိုသော တေးသီချင်း များကို မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတ အစည်းအရုံး (ဗဟို) မှတစ်ဆင့် တရားဝင် တားမြစ် နိုင်ပြီး တေးသီချင်း ဖန်တီး ထုတ်လုပ်သူများ အချင်းချင်း ငှါးရမ်း အသုံးပြုရန် သဘော တူညီမှု မရမချင်း ငှါးရမ်း အသုံးပြုခွင့်ကို ဆိုင်းငံ့ ထားမည်ဟု ယင်းသတင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။တေးသီချင်း ဖန်တီး ထုတ်လုပ်သူများ အနေဖြင့် သုံးစွဲခွင့် ပြုခြင်း၊ မပြုခြင်း၊ သုံးစွဲခွင့် ပြုရန် အတွက် အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ခြင်း၊ တေးသီချင်း များကို ငှားရမ်း အသုံးပြုရန် အတွက် ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ခြင်းကို ဆန္ဒ အလျောက် လွတ်လပ်စွာ သတ်မှတ် ဆုံးဖြတ် နိုင်သည်ဟု ဂီတ အစည်းအရုံးမှ သိရှိရသည်။တေးရေး၊ တေးဆိုသူ၊ တီးခတ်သူ၊ အသံဖမ်း စတူဒီယို၊ ထုတ်လုပ်သူ များ နှင့် တေးသီချင်း ငှါးရမ်း သုံးစွဲသူများ ဖြစ်သော FM ရေဒီယို၊ TV Station များ၊ မိုဘိုင်း တယ်လီဖုန်း Ring Back Tone ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူများ၊ မီဒီယာများ၊ တေးသီချင်း ပြိုင်ပွဲ ပြုလုပ်သူ များနှင့် တေးသီချင်း များကို စီးပွားဖြစ် အသုံးပြု နေသူနှင့် အကျုံးဝင်ပြီး တေးသီချင်း များကို စီးပွားဖြစ် အသုံးပြု နေသူများ အနေဖြင့် ထုတ်လွှင့် အသုံးပြုလို လျှင် ဂီတ အစည်းအရုံးနှင့် အသုံး မပြုမီ မထုတ်လွှင့်မီ ကြိုတင် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ရမည်ဟု ဂီတ အစည်းအရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။ွှThe Voice
January 06, 2013, 10:32:28 AMReply #756 ---ThE Cr0w----
ကျော်သူ ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်တော့မည်၎.၁.၂၀၁၃ လွတ်လပ်ရေးနေ့ နေ့လည် (၂း၃၀) နာရီအချိန်၌ ရွှေစင်စင်္ကြာမော်တော်ယာဉ်အဖွဲ့မှ ပိုင်ရှင် ဦးမိုးနိုင်နှင့် မန်နေဂျာ ကိုကျော်မိုး အပါအဝင် ဝန်ထမ်းများသည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) သို့ ရောက်ရှိလာကြပြီး အလှူငွေကျပ်သိန်း (၁၅ဝ) ကျပ်အား ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့သည်။ ရွှေစင်စင်္ကြာအဖွဲ့သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ ငွေရေတွက်စက်၊ မျက်စိခွဲစိတ်ခန်းနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ လိုအပ်သည့်နေရာ အသီးသီးတို့အတွက် အလှူရေစက် လက်နှင့်မကွာ လှူဒါန်းပေးနေသည့် မြင့်မြတ်လှသော အလှူရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ထို့အပြင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ လူမှုရေးခရီးစဉ်များအဖြစ် မြန်မာပြည်အနှံ့ လိုက်လံသွားရောက်မှု ခရီးစဉ်များအတွက် ပို့ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးနေသော အလှူရှင်များလည်းဖြစ်သည်။သို့ရာတွင် ယခုလာရောက်လှူဒါန်းသော လှူဒါန်းရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အနေဖြင့် ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ ဒီဗီဒီ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးပြီး ရရှိလာသော အကျိုးအမြတ်များအား အများအကျိုးအတွက် အသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ရွှေစင်စင်္ကြာ မော်တော်ယာဉ် မိသားစု၏ ဆန္ဒအား ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူသည် ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တော့သည်။ ရုပ်ရှင်အနုပညာနယ်ပယ်မှ ထွက်ခွာခဲ့ရသည်မှာ (၅) နှစ်ကျော် ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သော် လည်း ယခုကဲ့သို့ အများအကျိုးအတွက် အကျိုးရှိမည့် အကျိုးပြုဇာတ်လမ်းအား ရိုက်ကူးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်တော့သည်။ယင်းဇာတ်ကားသည် အတ္တ အနုပညာအတွက်မဟုတ် ပရဟိတအနုပညာလုပ်ငန်း သက်သက်သာ ဖြစ်စေရမည်။ ပရဟိတလုပ်ငန်းများအား ၀ါသနာပါသော၊ စွန်လွှတ် ပေးဆပ်နိုင်သော အနုပညာရှင်များဖြင့် လက်တွဲ၍ ရိုက်ကူးသွားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ယင်းအခမ်းအနား မစမှီ၌ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် လာရောက်ပေးဆပ်နေသော နန်းခင်ဇေယျာ အား တယ်လီဖုန်းဖြင့် တီးခေါက်ကြည့်မိသောအခါ အားတက်သရော ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ပေးမည်ဟု ပြောကြား ခဲ့၍ ဦးကျော်သူသည် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးပေးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တော့သည်။ယင်းဇာတ်ကားအား လူမှုရေး စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သော၊ စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်ရဲသော သရုပ်ဆောင် အနုပညာရှင်များ၊ လူမှုရေးဂီတသူရဲကောင်းများ၏ သီချင်းသံစဉ်များ၊ ပြည်သူ့အတွက် ရုပ်ရှင်စက်မှု လုပ်သားများ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ လူမှုရေးသမားများ ဝန်ထမ်းများအပြင် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်ရှိ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ အသင်းသား/သူများနှင့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မရိုက်ကူး မတင်ပြဖူးသော လူ့လောကအတွင်းရှိ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို အများပြည်သူတို့အတွက် (၅) နှစ်ကျော် အနုပညာလောကနှင့် ဝေးကွာခဲ့ရသော ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်/ဒါရိုက်တာဟောင်း ဦးကျော်သူ၏ ပထမဦးဆုံး အနုပညာ ထွက်ပေါက်အဖြစ် ဆန်းသစ်စွာ ရိုက်ကူးတင်ပြ ထုတ်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါတော့သည်။ကျော်သူ facebook January 06, 2013, 10:48:07 AMReply #757 ---ThE Cr0w----
City FM ၁၁ နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ဆုရရှိသူများစာရင်း ၁။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး မြန်မာသံတေးစီးရီး ထုတ်လုပ်သူဆု - လှိုင်းတေးသံသွင်း၂။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စတီရီယိုတေးစီးရီး ထုတ်လုပ်သူဆု - မီးအိမ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ၃။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး မြန်မာသံတေးစီးရီး သီဆိုသူ အမျိုးသမီးတေးသံရှင်ဆု - မာမာအေး၎။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စတီရီယိုတေးစီးရီး သီဆိုသူ အမျိုးသမီးတေးသံရှင်ဆု - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း၅။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စတီရီယိုတေးစီးရီး သီဆိုသူ အမျိုးသားတေးသံရှင်ဆု - ဆိုတေး၆။ အအောင်မြင်ဆုံး တေးဂီတအဖွဲ့ (Music Group) ဆု - IDIOTS BAND၇။ တေးသီချင်းတောင်းဆိုမှုအများဆုံး အမျိုးသမီးတေးသံရှင်ဆု - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း၈။ တေးသီချင်းတောင်းဆိုမှုအများဆုံး အမျိုးသားတေးသံရှင်ဆု - ဘန်နီဖြိုးpopular
January 13, 2013, 03:56:07 AMReply #758 ခင်သက်
ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့် ရကြပါစေ
Credit : 5521 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Gender: Re: ပြည်တွင်း အနုပညာရပ်ဝန်းမှ သတင်းများ
ရန်ကုန်မြို့သို့ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသော တေးသံရှင် မာမာအေးသည် ယနေ့ ညနေ ၇ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင်ပြည်သူချစ်သော မာမာအေး၏ ရသနှလုံးသားပေးဆပ်ပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ တေးသံရှင် မာမာအေး၏ ရှိုးပွဲသို့ အနုပညာရှင်ကြီးများစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပရိတ်သတ်ပေါင်းများစွာကလည်း ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။"ကျွန်မဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်း တွေ့ပြီ။ ကျွန်မတက်စွမ်းသလောက် ကြိုးစားတင်ဆက်ပါမယ်။ ကျွန်မက လောလောဆယ် အမြင်လေးက လှနေပေမယ့်။ ဆယ်လေးနှစ်လောက် ထုထောင်းခံရတဲ့ နှလုံးသားကလည်းအတွင်းကြေနေပါပြီ" ဟု တေးသံရှင် မာမာအေးက ပြောကြားသည်။တေးသံရှင် မာမာအေးသည် ပြည်တွင်းတွင် ၃ လဝန်းကျင် နေထိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီးကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် အမေရိကသို့ ပြန်လည်သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။"ကျွန်မက ဟိုရှေးတုန်းက ပထမ မာမာအေးကို အခုမာမာအေးက မှီချင်မှမီတော့မှာ။ ဒါပေမယ့်ကြိုးစားပြီတော့ ပေးဆပ်ပါမယ်" ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။အိအိဓာတ်ပုံ - စူးရှ The myanma age
January 16, 2013, 02:03:09 AMReply #759 ခင်သက်
အမေရိကန်ရောက်နေတဲ့ချင်းမိန်းခလေးအဆိုတော်တဦးကို အမေရိကန်တေးထုတ်လုပ်ရေးကုမ်ပဏီတခုနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး အယ်လ်ဘမ်တချပ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမည်ကတော့မမီလာနှင်းMilla Dawt Hniang ပါ။ သူရဲ့ Goneဆိုတဲ့ အယ်လ်ဘမ်တချပ်ကို ဇန်န၀ါရီဒုတိယအပတ်အတွင်းကပဲ Tate Music Group မှဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအယ်လ်ဘမ်မှာ မမီလာနှင်းရေး ကိုယ်တိုင်ရေး သီချင်း ရှစ်ပုဒ်ပါပါတယ်။ သူမရဲ့ ချိုမြတဲ့ထူးခြားတဲ့အသံကိုသဘောကျလို့ ဒီကုမ်ပဏီက စာချုပ်ချုပ်တာလိုသိရပါတယ်။ မမီလာနှင်းဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပိုလီယိုရောဂါခံစားရတာဖြစ်ပြီး ဘ၀အရှုံးမပေးပဲကြိုးစားလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ BBC Burmese interview link လေးပါ။Code: [Select]http://www.bbc.co.uk/burmese/multimedia/2013/01/130114_milla.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1ဒီလင့်လေးမှာ သူကို support လုပ်ပေးလိုရပါတယ်။Code: [Select]http://www.playcrossroads.com/u/MilladhniangRef: BBC Burmese News
January 16, 2013, 10:19:57 PMReply #760 ---ThE Cr0w----
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ချစ်သူနဲ့အတူ ပွဲတက်ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း က ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ Miss Now How 2013 ပွဲကို ချစ်သူနဲ့အတူ ပွဲတက်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ချစ်သူလည်း ရှိနေပြီ ဖြစ် တဲ့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းက သူ့ရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းကတော့ လိုပါသေးတယ် လို့ ပြော ပါတယ်။Popular Journal
January 17, 2013, 10:28:02 PMReply #761 ---ThE Cr0w----
အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ် တုရှိရွှေကြယ်ကို လှူဒါန်းလိုက်သူ အကယ်ဒမီ ချစ်စနိုးဦး၂ဝ၁၁ခုနှစ် အတွက် အမျိုး သမီး ဇာတ်ပို့ အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆု ရရှိခဲ့တဲ့ ချစ်စနိုးဦးက ဆုရတဲ့ အမှတ်တရ အဖြစ် အကယ်ဒမီရွှေ စင်ရုပ်တုရဲ့ ထိပ်က ရွှေကြယ်ကို လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းလို့ ရအောင် အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တအရိယဝံသထံ ဇန်နဝါ ရီ၁၂ရက်နေ့၊ မနက်၉နာရီခွဲက သွား ရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။အခုလို လှူဒါန်းမှုကို အကယ်ဒမီဆု မရခင် ကတည်းက အဓိဋ္ဌာန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် လှူဒါန်းဖြစ်တာလို့ လည်း ပြောပြပါတယ်။ လှူဒါန်းမှုက ပရိသတ်တွေအတွက်ပါ ကုသိုလ် ရအောင် ရည်စူးပြီး လှူဒါန်းဖြစ်ပုံကို ချစ်စနိုးဦးက“ဒီနေ့လှူဖြစ်တာက အကယ်ဒမီပေးပွဲ မတိုင်ခင်ကတည်းက အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ ပုဂံအလိုတော်ပြည့်ဘုရားဖူး သွားပြီးတော့ အဓိဋ္ဌာန် လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆရာတော်ကတော့ ပြောတယ်။ ဒီဆုက ပထမဦးဆုံး ရတဲ့ဟာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မလှူပါနဲ့လို့ ပြောပေမယ့်လည်း စနိုးရဲ့ပရိသတ်တွေ အတွက်ရော၊ မိသားစုအတွက်ပါ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေး လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်လေးနဲ့ လှူဖြစ်သွားတယ်။ လှူဖြစ်တာကလည်း အကယ်ဒမီ ရွှေစင် ရုပ်တုရဲ့ ထိပ်ကကြယ်လေးက ရွှေ၂ကျပ်သားလောက် ရှိတယ်။ ဆုမရခင် ကတည်းကလည်း ဆုရလာရင် လှူဖို့ကို စိတ်ကူးထားတယ်။ လှူတဲ့အချိန်မှာ လည်း ဘယ်နေရာ မှာပဲ သုံးသုံး အကုန်လုံးကို ကောင်း စေချင်တဲ့ စိတ်ထားပြီးတော့ လှူလိုက်တယ်။ ဆရာတော်ဘယ်နေရာမှာပဲ သုံးသုံး၊ ထီးတော်တင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊အဆင်ပြေမယ့် နေရာမှာသုံးလို့ ရအောင် လှူဖြစ်တယ်။ စနိုးအတွက်တော့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာ တစ်ခုကို ကိုယ့်မိသားစု အတွက်ရော၊ ထမင်းရှင် ဖြစ်တဲ့ ပရိသတ် အတွက် ပါ ရည်စူးပြီး လှူတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စနိုးရဲ့ ပရိသတ်တွေ အားလုံး လည်းသာဓုခေါ်နိုင်ကြပါ စေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ လှူဖြစ်တယ်”လို့ လှူဒါန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပါ တယ်။အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်တုက ကြယ်ကို လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အတွက် ရုပ်တုက ကြယ်နေရာမှာ အစားထိုး ဖို့အတွက် ကြယ်ကိုလည်း အစား ထပ်လုပ်ပြီး ရုပ်တုကို အိမ်ရှေ့ ဧည့် ခန်းမှာထားထားမယ်လို့လည်း ရုပ် တု အကြောင်းပြောပြတာကြောင့်“ရွှေစင်ရုပ်တုကရွှေစင်ကြယ်ကို လှူမယ်ဆိုတော့ ကိုခန့်က ဦးစီးပြီးတော့ လုပ်ပေးတယ်။ ဦးပီအောထွန်းရင်ဆီ မှာပဲ ဒီအရုပ်လေးကို သွားပြန်အပ် လိုက်ပြီးတော့ ရွှေစင်ကြယ်ကိုတော့ ဖြုတ်ပြီးလှူလိုက်တယ်။ ရွှေစင် ကြယ် နေရာလေးမှာ ကြေးကြယ်လေး နောက်တစ်ခု ပြန်တပ်ဖို့ အပ်ထား တယ်။အခုထိတော့ ရုပ်တုက ပြန်မရ သေးဘူး။ အပ်ထားတုန်းပဲ ပြန်ရလာ ရင်တော့ဧည့်ခန်းမှာပဲမှန်ပေါင်လေးနဲ့ သေချာလေးထားဖို့ စိတ်ကူးထား တယ်”လို့ ပြောပါတယ်။ချစ်စနိုးဦးကို နောက်ကနေလိုက်ပြီး ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်စူဆန် ကလည်း သမီးဖြစ်သူကဒီလိုအကယ်ဒမီဆု ရခဲ့တဲ့အတွက် ဝမ်းသာပီတိဖြစ် ရသလို၊ ဒီလိုကြယ်စင် လှူဒါန်းမှုအတွက် သမီးကိုယ်စား တအားဝမ်းသာ ရပါတယ်လို့လည်း ပီတိစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ ချစ်စနိုးဦးက အကယ်ဒမီ ဂုဏ်ပြုပွဲ ကိုတော့ ဇန်နဝါရီ၂ဝ ရက် နောက်ပိုင်းမှာ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေ တယ်လို့လည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။Popular Journal
January 17, 2013, 11:49:14 PMReply #762 ---ThE Cr0w----
အကယ်ဒမီ စိုးသူရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်သူဇာ(အသက် ၇၂နှစ်)သည် ဇန်န၀ါရီ ၁၆ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲမှာ ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ် နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်သွားကြောင်း သိရပါတယ်။ “ဈာပနကို မိသားစုစုံသွားအောင် အမေရိက က လာမယ့် အစ်မ ကို စောင့်ရင်းနဲ့ ၅ ရက်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာ မိခင်ကြီးရဲ့ ဆန္ဒ အတိုင်း ရေဝေးသုဿန်မှာ ဂူသွင်းသဂြိုဟ်မှာပါ”လို့ စိုးသူကပြောပါတယ်။ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ နေအိမ်မှ ကားများ မနက် ၉ နာရီ မှာ ထွက်မှာဖြစ်ပြီး ဇန်န၀ါရီ ၂၂ ရက်နေ့ မှာတော့ ရက်လည်ဆွမ်းသွတ် တရားနာမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။Popular Myanmar News Journal
January 22, 2013, 11:00:14 PMReply #763 ---ThE Cr0w----
လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ ရုပ်ရှင်နှင့်ဂီတပွဲတော် ၂၀၁၃နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ဇာတ်ကား (၃၃) ကား စာရင်း ထုတ်ပြန်လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ ရုပ်ရှင်နှင့်ဂီတပွဲတော် ၂၀၁၃ ကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၉ နှင့် ၃၀ ရက်နေ့ တို့တွင်နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီထိ တော်ဝင်စင်တာမြေညီထပ်ရှိ DVD ရုပ်ရှင်ရုံ(၂) ရုံတွင်ပြိုင်ပွဲဝင် ရုပ်ရှင်ကားများထဲမှ နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ရုပ်ရှင်ကားတို့ကိုအများပြည်သူ ကြည့်ရှု့ရန် ပြသ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ပရိတ်သတ်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကားကို ပရိသတ်များမှ မဲပေးရွေးချယ်ပေးနိုင်ရန်လည်းစီစဉ်ထားပြီး အဆိုပါပွဲတော်အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ရုပ်ရှင်ကား (၅၅)ကား များအနက်နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ရွေးချယ်ထားသော ဇာတ်ကား (၃၃) ကားစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသိရသည်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသီချင်းပြိုင်ပွဲ အတွက်လည်း ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာသံစဉ် နှင့် အနောက်တိုင်း သံစဉ် စုစုပေါင်းသီချင်း (၁၁၈)ပုဒ် အနက်နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ရွေးချယ်ထားသော (၉) ပုဒ် စာရင်းကိုလည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ညနေ ၆ နာရီတွင်တော်ဝင်စင်တာ (၇)လွှာ ၌ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ရုပ်ရှင်ကားများမှာAnimation၁ ။ ရုပ်စုံသဘင် (Puppet) - ဒါရိုက်တာ ရဲဝင်း၂ ။ Democracy - ဒါရိုက်တာ စွမ်းသူရထွန်း၃ ။ Let’s Grow Together - ဒါရိုက်တာ အောင်ရဲကျော်၎ ။ The Rose (နှင်းဆီ) - ဒါရိုက်တာ မောင်ဆန်း၅ ။ Goal - ဒါရိုက်တာ အောင်မင်းခန့် နှင့် စည်သူအောင်ဆွေ၆ ။ မျိုးစေ့ (The Seed) - ဒါရိုက်တာ ဇော်ဗိုလ်ဗိုလ်ဟိန်း၇ ။ Try Again - ဒါရိုက်တာ Edo VaderDocumentary၁ ။ ဘုရားပွဲတော်သွားစို့နော်(On Holiday) - ဒါရိုက်တာ ရှင်ဒေ၀ီ၂ ။ Spring Hlegu - ဒါရိုက်တာ ထွန်းထွန်းအေး၃ ။ ရန်ကုန်မြို့မှ ကြိုဆိုပါတယ် - ဒါရိုက်တာ ကိုသောင်း၎ ။ ပန်းကျောင်းပေါ်က လရောင် - ဒါရိုက်တာ နဒီ၅ ။ The Comedian Without Fear - ဒါရိုက်တာ Min Koon(Five Seven)၆ ။ The Bright Future - ဒါရိုက်တာ ရှင်ဒေ၀ီ၇ ။ Equality - ဒါရိုက်တာ ကောင်းဆင့်(Vincent)Short Film၁ ။ The Night - ဒါရိုက်တာ တင်ဝင်းလှိုင်၂ ။ Made In Myanmar - ဒါရိုက်တာ ကျော်သူမင်းနိုင်၃ ။ Welcome Democracy - ဒါရိုက်တာ သန့်စင်အောင်၎ ။ ခုနှစ်ထွေ(seven kinds) - ဒါရိုက်တာ နေခြည်၅ ။ လူပြိန်းတွေးတဲ့ဒီမိုကရေစီ - ဒါရိုက်တာ သက်ဆွေဝင်း၆ ။ လူကြီးကိုပြန်မပြောရ - ဒါရိုက်တာ ထွန်းစန်း၇ ။ Will Make It Move - ဒါရိုက်တာ ရေကြည်အေး၈ ။ ရေချမ်းစင် - ဒါရိုက်တာ နောင်မြင့်မိုရ်၉ ။ In Our Country - ဒါရိုက်တာ ထက်အောင်စံ၁၀ ။ BE(LIE)VE - ဒါရိုက်တာ အောင်မြတ်၁၁ ။ မင်္ဂလာပါ ဒီမိုကရေစီ - ဒါရိုက်တာ သုတ(မော်ကွန်း)၁၂ ။ We,the creator - ဒါရိုက်တာ - အောင်ဇော်မိုး၁၃ ။ EGOIST - ဒါရိုက်တာ ပပဆန်းကျော်၁၄ ။ အားလုံးကောင်း(Everything is OK) - ဒါရိုက်တာ ငြိမ်းသစ်၁၅ ။ ဒီမိုကရေစီ(သို့) - ဒါရိုက်တာ ဆူးခက်မင်း၁၆ ။ Visible thought in Yangon (ရန်ကုန်က အတွေးများ) - ဒါရိုက်တာ ရဲလင်းသော်Photo Essay၁ ။ Reunion - ဒါရိုက်တာ ထွန်းထွန်းအေး၂ ။ We Don’t Know Democracy - ဒါရိုက်တာ ကျော်နှင်းဆီ၃ ။ Down Of The Nation - ဒါရိုက်တာ စိုးဇေယျထွန်းနောက်ဆုံးအဆင့် ရွေးချယ်ထားသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဂုဏ်ပြုသီချင်း၁ ။ အကြီးမြတ်ဆုံးဂုဏ် - တေးရေး ရဲနိုင်လင်း(ကျိုက်လတ်)၂ ။ ပြည်သူချစ်သော တို့ဗိုလ်ချုပ် - တေးရေး စိန်ညီဆွေ (မန်း)၃ ။ ပြည်သူ့အရိုင်းပန်း - တေးရေး အဲမွန်တာရာ၎ ။ အောင်ဆန်းမျိုးဟေ့ မြန်မာ - တေးရေး လင်းထက်၅ ။ တုနှိုင်းမဲ့သခင် - တေးရေး မာန်ဟိဏ်းကျော်၆ ။ ရှင်သန်နေဆဲသူရဲကောင်း - တေးရေး Extra T၇ ။ သမိုင်းထဲကသူရဲကောင်း - တေးရေး ခင်နန်းထိုက်စံ၈ ။ ထာဝရ အေးချမ်းမှုလေပြေ - တေးရေး ခင်နန်းထိုက်စံ၉ ။ ဗိုလ်ချုပ် - တေးရေး S.G.D Popular Myanmar January 31, 2013, 09:47:33 PMReply #764 ---ThE Cr0w----
လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ဂီတပွဲတော်ဆုပေးပွဲလွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ဂီတပွဲတော်ဆုပေးပွဲတွင် မိန့်ခွန်းပြောနေသည့် ဦးတင်းဦးကိုတွေ့ရစဉ် လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ဂီတပွဲတော်ဆုပေးပွဲလွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ဂီတပွဲတော်ဆုပေးပွဲတွင် The Best Documentary ဆုရ ရှင်ဒေ၀ီကိုတွေ့ရစဉ် လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ဂီတပွဲတော်ဆုပေးပွဲတွင် The Best Animation ဆုရ ကိုရဲဝင်းကိုတွေ့ရစဉ် လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ဂီတပွဲတော်ဆုပေးပွဲတွင် ပရိသတ်ပေးသည့် ဆုရကိုထွန်းထွန်းအေးကိုတွေ့ရစဉ် လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ဂီတပွဲတော်ဆုပေးပွဲတွင် The Best Photo Eassyဆုရ ကိုစိုးဇေယျာထွန်း ကိုတွေ့ရစဉ် The Irrawaddy (Burmese Version)
February 05, 2013, 08:46:21 PMReply #765 ---ThE Cr0w----
ရဲလေးအဖေ ဈာပနမြင်ကွင်း 8 DAYS February 05, 2013, 11:36:43 PMReply #766 Mercury
Credit : 644 $ View Inventory
Send $/Gift Gender: Re: ပြည်တွင်း အနုပညာရပ်ဝန်းမှ သတင်းများ
တစ်သက်တာ ရုပ်ရှင်ဆုရှင် ဒါရိုက်တာဦးတင်ယု အသက် ၉၂ နှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ပုလဲကွန်ဒိုရှိ နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန်၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နေ့တွင် ဒါရိုက်တာ ဦးတင်ယုအား တစ်သက်တာ ရုပ်ရှင်ဆု ချီးမြှင့်စဉ်တစ်သက်တာရုပ်ရှင်ဆုကို ရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒါရိုက်တာဦးတင်ယု အသက် ၉၂ နှစ်သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ပုလဲကွန်ဒိုရှိ နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ဒါရိုက်တာ ဦးတင်ယုသည် အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် 'ရွှေဒေါင်းတောင်' ဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ် စတင်ရိုက်ကူးခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တစ်ခေတ်တစ်ခါက အသက်အငယ်ဆုံး ဒါရိုက်တာဖြစ်လာသူတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခံထားရသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ဒါရိုက်တာ ဦးတင်ယုကို ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဖခင်ဂျေ-ဦးမောင်စိန်၊ အမိဒေါ်မြခင်တို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပြီး အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်တွင် မြန်မာအဆွေကုမ္ပဏီ(ယခုအေ၀မ်းရုပ်ရှင်)မှ ဦးလေးဖြစ်သူ ဒါရိုက်တာ မင်းသားကြီး ဦးတင်မောင် ရိုက်ကူးသည့် 'မြားနတ်မောင်' ဇာတ်ကားတွင် မှတ်တမ်းတင်သူအဖြစ်မှ စတင်ကာ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ဦးတင်ယုသည် ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် 'ရွှေဒေါင်းတောင်' ဇာတ်ကားမှ စတင်ကာ ဒါရိုက်တာအဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အသက် ၉၂ နှစ်အချိန်ထိ ဇာတ်ကားပေါင်း ၆၀ ကျော် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘုံဘေမြို့၊ ကိုလ်ကတ္တားမြို့၊ စင်ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်၊ ဘန်ကောက်နှင့် တိုကျိုမြို့များသို့ သွားရောက်ခဲ့ပါ သည်။'အလောင်းတော်ရာမ'၊ 'အောင်ခြင်းရှစ်ပါး' နှင့် 'နန်းတွင်းအရေးတော်ပုံ' ဇာတ်ကားများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အကြိမ်ကြိမ် သွားရောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဂျပန်-မြန်မာ ပူးပေါင်းရိုက်ကူးသော ဂျာနယ် ကျော်မမလေး၏ ၀တ္ထု 'သွေး' ဇာတ်ကားတွင် ဂျပန်ဒါရိုက်တာ မစ္စတာချီနိုနှင့် မြန်မာဘက်မှ ဒါရိုက်တာဦးတင်ယုတို့ ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသည်။ ဒါရိုက်တာ ဦးတင်ယုသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ၀ိဇ္ဇာပညာထူးချွန်(ဒုတိယအဆင့်) ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ဓာတ်ပုံထူးချွန်ဆုကို မြဇော်ဖလင်မှ 'မေတ္တာရွှေရည်' ဇာတ်ကားဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒါရိုက်တာ ဦးတင်ယုသည် ထင်ရှားသည့် ဇာတ်ကားများစွာ ရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်ပြီး မောင်တို့ချယ်ရီမြေနှင့် အကျော်အမော် ဇာတ်ကားများမှာ ထင်ရှားသည့်ဇာတ်ကားများဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာဦးတင်ယု နောက်ဆုံးရိုက်ကူးခဲ့သော ဇာတ်ကားမှာ 'မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကို ကျော်လွန်၍' ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ယင်းဇာတ်ကားဖြင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွက် သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီထွန်း အိန္ဒြာဗိုက အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆု၊ နိုင်နုရှိန်(ဖထီး)က ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆုတို့ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါသည်။ဒါရိုက်တာဦးတင်ယုကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နေ့ ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားတွင် ရုပ်ရှင် လောကသားများက တစ်သက်တာ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုကို ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ဒါရိုက်တာဦးတင်ယု၏ အနုပညာ ဖြတ်သန်းမှု သမိုင်းကြောင်းကို ရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက်တွင် မှတ်တမ်းထားရှိရန် ဒါရိုက်တာအောင်စိုးဦးက ရိုက် ကူးထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကို ကျော်လွန်၍ ဇာတ်ကားဖြင့် အကယ်ဒမီဆုရရှိခဲ့သူ သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ''တကယ်ထူးချွန်တဲ့ ရုပ်ရှင်ပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ မခိုင်ကြီးတို့ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း ဇာတ်ကားရိုက် ကူးစဉ်ကတည်းက အသက်တော့ ကြီးနေပါပြီ။ ထိုင်ခုံမှာပဲထိုင်ပြီး ညွှန်ကြားနိုင်တဲ့ အခြေအနေပေါ့လေ။ မသိမနားလည်လို့ မေးတာမှန်သမျှကို အချိန်ပေးပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထူးချွန်တဲ့ ရုပ်ရှင်ပညာရှင် တစ်ယောက် ကွယ်လွန်သွားတာက ရုပ်ရှင်လောကအတွက် ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ပါပဲ''ဟု ၀မ်းနည်းစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဒါရိုက်တာဦးတင်ယုသည် ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၉၃ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပြီး သားသမီးလေးဦး၊ မြေး ၁၂ ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကွယ်လွန်သူအား ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရေဝေးသုသာန်၌ ပို့ဆောင်မီးသဂြိုဟ်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု သိရှိရသည်။
February 08, 2013, 11:55:13 AMReply #767 ---ThE Cr0w----
နေခြည်လင်းလဲ့ အင်တာဗျူးFollow Me အလှကုန်ကြော်ငြာနဲ့ အနုပညာလောကထဲဝင် ရောက်လာတဲ့သူကလေးက နေခြည်လင်းလဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုရဲ လေးရဲ့သီချင်း ရင်ခုန်သံစကားလေး တစ်ခွန်းမှာ ပရိသတ်ပိုပြီးသတိထား အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျန်ခဲ့ တဲ့လေးနှစ်အတွင်း ဆေးကျောင်း တစ်ဖက်နဲ့မို့ ကျောင်းစာကိုအာရုံ စိုက်ရင်း အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု အာကာသအနမ်း ဆိုတဲ့အခွေမှာ သီချင်းကိုယ်တိုင်ဆိုထားပြီး နောက်ထပ်တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီးအ ပြင် တခြားအနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ နေခြည် လင်းလဲ့ကို ဒီတစ်ပတ် 8 DAYS Cover Star အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။Q. လေးနှစ်တာကာလလုံး ကျောင်းစာတွေနဲ့ပဲ နပန်းလုံးခဲ့တာလား။A. ကျောင်းကလည်း စာတွေ ခက်လာတယ်။ အလုပ်တွေရှုပ်လာ တာလည်း ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေက ငြင်းဖြစ်တာများတယ်။ ခပ်နည်းနည်းလောက်ပဲလုပ်ဖြစ် တယ်။Q. အနုပညာအလုပ်တွေကို ငြင်းခဲ့တာ ကျောင်းစာကြောင့်သက် သက်လား။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပိတ်ပင်ထားခဲ့လို့လား။A. ကိုယ်တိုင်ကကို ကျောင်း တစ်ဖက်နဲ့အဆင်မပြေတာရယ်၊ ဗီဒီယိုကျတော့လည်း ရက်ရှည်ရိုက်ရ တာဆိုတော့ ကျောင်းစာတွေများ လာလို့ ဖျက်လို့မရတာကြောင့် မရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။Q. နေခြည့်ကို အဆိုတော် တစ်ယောက်နဲ့ တော်တော်လေးချစ် ခဲ့ကြတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု သူအိမ်ထောင်ပြုမယ့်သူက အပြင်လောကကလို့ပြောတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုခံစားရလဲ။A. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဘယ်လိုမှမခံစားရပါဘူး။Q. ခု ညီမလေးကို မီဒီယာ တွေမှာ ပြန်မြင်တွေ့လာရတယ် နော်။A. Final Part II က အရမ်း အရေးကြီးတယ်။ အဲဒါကြောင့် ခဏ နားထားတယ်။ နားတဲ့အချိန်လေး မှာ ဗီစီဒီနဲ့ ကြော်ငြာတွေရိုက်ဖြစ် တယ်။ Final Part II က ဖြေပြီး သွားပြီ။ ဒီအချိန်လေးအတွင်းမှာ အားနေတယ်။ ပရိသတ်ကလည်း အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ပါလို့တိုက် တွန်းတော့ သီချင်းဆိုဖြစ်သွားတယ်။Q. ဆေးကျောင်းသူလေးနေ ခြည်လင်းလဲ့နဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေပြန်လုပ်မယ့် နေခြည်လင်းလဲ့မှာ ကွာခြားသွားတာက...A. အမှန်တကယ်တော့ ဒီဘ၀ နှစ်ခုက သပ်သပ်စီ လုံးဝမတူဘူး။ အရမ်းကွာတယ်။ ဆေးကျောင်းမှာ ကျတော့လည်း စာပုံမှန်ကျက်၊ ကျောင်းပုံမှန်တက်တဲ့ဆေးကျောင်း သူလေးပေါ့။ ဆေးရုံမှာ ဆရာဝန် တစ်ယောက်ပေါ့။ ငယ်ငယ်က တည်းက ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်လို့ စာကို ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ အနုပညာအလုပ် ကျတော့လည်း ကိုယ်ကလုပ်ရင်းနဲ့ ၀ါသနာပါလာတယ်။ နေခြည်ဆရာ ၀န်ဖြစ်ချင်သလို အနုပညာရှင်တစ် ယောက်လည်းဖြစ်ချင်တယ်။Q. ညီမလေး သီချင်းတွေဆို မယ်ဆိုတော့ ခံစားချက်တွေပြောပြီး သီချင်းတွေအပ်ခဲ့တာလား။A. သီချင်းတွေအပ်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခံစားချက်ကိုပြော ပြီးတော့ သီချင်းမအပ်ဖူးဘူး။ ကိုယ့် ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုက်ညီမယ့်သီချင်း မျိုးတွေအပ်ဖို့တော့ အစီအစဉ်ရှိပါ တယ်။Q. နေခြည်လင်းလဲ့က အချစ် သီချင်းတွေပဲကြိုက်တာလား။A. အဓိကက ပျော်ရင်လည်း သီချင်းနားထောင်တယ်။ စိတ်ညစ် ရင်လည်း သီချင်းနားထောင်တယ်။ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း စိတ် ဓာတ်အရမ်းကျပြီး စိတ်ပျော်စေ မယ့်သီချင်းတွေနားထောင်တယ်။ အချစ်သီချင်းတွေကတော့ ပရိ သတ်ရင်ထဲကိုပိုရောက်တာပေါ့။ ခု အာကာသအနမ်းခွေထဲမှာ နေခြည် ကိုထိန်ဝင်းနဲ့တွဲပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ် ဆိုထားတယ်။ အမြူးလေးဆိုထား တာပါ။Q. အချစ်ကလူတစ်ယောက် ကို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားယွင်းစေ တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ညီမလေးလက် ခံလား။A. နေခြည့်ဘ၀မှာ အချစ် ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ တွေဝေ ခဲ့ဖူးတဲ့ကာလတွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခု တော့ နည်းနည်းစဉ်းစားတတ်တဲ့အ ရွယ်ရောက်လာပြီ။ အရင်က အချစ် ကိုဦးစားပေးခဲ့ဖူးတယ်။Q. ကိုယ့်ကိုတကယ်ရင်ထဲက မချစ်ဘဲ ချစ်ဟန်ဆောင်တဲ့သူနဲ့တွေ့ ဖူးလား။A. မချစ်ဘဲနဲ့ ချစ်ဟန်ဆောင် တဲ့သူဆိုပြီးတော့ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ နေခြည် အရင်က တစ်ဖက် သားကို အရမ်းယုံကြည်တတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရတာများလာတော့ လူတွေ အကြောင်းပိုသိလာတဲ့အချိန်မှာ လူ တွေကို လွယ်လွယ်မယုံတတ်တော့ ဘူး။ သံသယမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တတ် လာတယ်။Q. နေခြည်လင်းလဲ့မဟုတ်ဘဲ သာမန်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ချင်တဲ့စိတ် မျိုး ဖြစ်ဖူးလား။A. နေခြည် အဲဒီလိုဖြစ်ဖူး တယ်။ လူတွေက တစ်ခုခုဆိုဝိုင်း ပြီးပြောကြတဲ့ဘ၀မျိုး မလိုချင်ဘူး။ တကယ်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွား လာလို့ရတဲ့သာမန်မိန်းကလေးငယ် ဘ၀မျိုးလိုချင်တယ်လို့ အနုပညာအ လုပ်စလုပ်ခါစအချိန်တွေမှာ ဖြစ်ခဲ့ ဖူးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အတွေးကပြောင်းသွားတယ်။ သာမန် မိန်းကလေးတစ်ယောက်လည်းမ ဟုတ်ဘဲ ဘာမှကိုမဖြစ်ချင်တော့တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ခံစားမှု မျိုးခံစားခဲ့ဖူးတယ်။Q. ညီမလေးရဲ့လက်ရှိအချစ် ရေးက...A. နည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးနေတယ်။ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့။Q. အရင်က ပရိသတ်တွေ ထင်နေတဲ့သူလား။A. လုံးဝအနုပညာလောက ထဲကမဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းကပါပဲ။ နေခြည့်ချစ်သူနဲ့ ကြိုက်နေတာကြာ ပြီ။ ရိုးသားတဲ့ဆရာဝန်လောင်းလေးပါ။ ကိုယ်ထင်ရင် ခုတင်ရွှေနန်းပေါ့။8days
February 11, 2013, 09:49:06 PMReply #768 ---ThE Cr0w----
ကိုဃကြီး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ မြန်မာဂီတ ရော့ခ်အဆိုတော် ဟယ်ရီလင်း (ခ) ဦးထွန်းမြင့်ဦး အသက် (၅၂) နှစ်သည် ၅.၂.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ (၄းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်မြောင်းနေအိမ်၌ ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခဲ့ သည်။ တေးသံရှင် ဟယ်ရီလင်း၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သည့် ရုပ်ခန္ဓာအား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ နေအိမ်သို့ သွားရောက်သယ်ယူပြီး ရေဝေးသုဿန် အအေးခန်းသို့ ပို့ဆောင်ကူညီ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ တေးသံရှင် ဟယ်ရီလင်းသည် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ဂီတလောကသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး တန်ဖိုးများနဲ့ ပေးဆပ်ခြင်း၊ ဟယ်ရီလင်းရဲ့ ဟယ်ရီလင်း၊ နောက်လူမြည်းရင်ချိုပါစေ၊ ကျောက်ခေတ်၏နောက်ဆုံးနေ့၊ ဂြိုလ်သားတစ်ယောက် အစရှိသည့် တေးစီးရီး အယ်လ်ဘမ်များ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အခြားစီးရီးခွေများလည်း ပါဝင် သီဆိုခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဂီတအမျိုးအစားများ မည်မျှပင်ပေါ်ပေါက်စေကာမူ ရော့ခ်ဂီတ (သီချင်း) မဟုတ်ရင် မသီဆိုချင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။ ဟန်ဆောင်လောကကြီးထဲမှ ရိုးသားပွင့်လင်းသည့် ရော့ခ်ဂီတ (သီးသန့်)တစ်ယောက် ကမ္ဘာမြေပြင်မှ ထွက်ခွာသွားခြင်းသည် ဂီတလောကကြီးအတွက် အစားထိုးမရ သလို နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှလည်း ကျန်ရစ်သူမိသားစုနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမိ ပါသည်။ ၇.၂.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ (၅းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ရေဝေးသုဿန်တွင် တေးသံရှင် ဟယ်ရီလင်း ၏ ဈာပနအခမ်းအနားအား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ကူညီပေးခဲ့ပြီး တေးသံရှင် ဟယ်ရီလင်း၏ နောက်ဆုံးခရီးအား လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြသော မိသားစုဝင်များ၊ အနုပညာလုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်များ၊ တေးချစ်ပရိသတ်များအား ထာဝရ ခွဲခွာသွားပြီဖြစ်သော်လည်း သူသီဆိုခဲ့သည့် တေးသီချင်း များသည် တေးချစ်ပရိသတ်များတို့၏ ရင်ထဲတွင် အစဉ်ထာဝရ တည်ရှိနေမည် အမှန်ပင်ဖြစ်တော့သည်။ တေးသံရှင် ဟယ်ရီလင်း (ခ) ဦးထွန်းမြင့်ဦး (ခ) ကိုဃကြီး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေKyaw Thu
February 12, 2013, 11:05:06 PMReply #769 ---ThE Cr0w----
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း နှင့် ဥက္ကာ တို့၏ မဂ်လာဦးဆွမ်းကျွေး အောင်ရတနာ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မေရီလန်းမြို့၊ အမေရိကန်နိုင်ငံမြန်မာ့သားကောင်း FB
February 13, 2013, 10:01:23 AMReply #770 ခင်သက်
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မော့စ်သည်ယနေ့နံနက်လေးနာရီ မိနစ်၂၀ကပဲ SSC အထူးကုဆေးရုံတွင်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်(ဦး)မော့စ်၏သားဖြစ်သူ(ကို)ထိုက်စံ ၏ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ဓာတ်ပုံ-(ကို)ထိုက်စံဖေ့စ်ဘုတ်credit to Myawady News
« Last Edit: February 13, 2013, 10:06:11 AM by ခင်သက် »
February 15, 2013, 10:54:52 PMReply #771 ---ThE Cr0w----
ရုပ်ရှင်ထုပ်လုပ်သူတစ်ဦးက ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်အချို့ နှုတ်ထွက်ပေးရန် လွှတ်တော်သို့တိုင်ကြားထားရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးက ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌအပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင်အချို့အား နှုတ်ထွက်ပေးရန် လွှတ်တေ်ာသို့တိုင်ကြားထားကြောင်း ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဦးဇင်ဝိုင်းက ယနေ့ပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။"သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံဗီဒီယိုအခြေခံအစည်းအရုံး ဆိုပြီးခွဲထွက်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်လာပါတယ် စည်းလုံးညီညွတ်နေတဲ့ အစည်းအရုံးတစ်ခုပြိုကွဲမှာကြောက်လို့အတွင်းစည်းအနေနဲ့ဒီပြဿနာကိုညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ် မရတဲ့အတွက်ဒီလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရတာပါ ကျွန်တေ်ာအပါအ၀င် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက အတွင်းရေးမှုးကိုပါ နှုတ်ထွက်ဖို့တိုင်းကြားစာမှာထည့်သွင်းတိုင်းကြားထားတယ် " ဟု ဦးဇင်ဝိုင်းကပြောသည်။မာန်ထက်ချီ ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူ ဦးဝင်းကိုက ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ချို့အားတိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင်လည်းဖော်ပြထားသောကြောင့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ ပြန်လည်ဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်သည်။Messenger News Journal
February 15, 2013, 10:56:08 PMReply #772 ---ThE Cr0w----
ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးက ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်အချို့ နှုတ်ထွက်ပေးရန် လွှတ်တော်သို့တိုင်ကြားထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဒုတိယ ဥက္ကဌ လူမင်းက ပြန်လည်ရှင်းလင်းနေစဉ်Messenger News Journal
March 05, 2013, 09:24:10 PMReply #773 ---ThE Cr0w----
မြန်မာပြည်မှ မထွက်ခွါမီ တေးသံရှင် မာမာအေး၏ ပုံတူပန်းချီ၊ ပန်းပုပြုလုပ်ပန်းချီ၊ပန်းပုပညာရှင် ခြောက်ဦး၏ ပုံတူပန်းချီနှင့် ပန်းပုလက်တွေ့ရေးဆွဲထုလုပ်ဂုဏ်ပြုပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အမှတ် (၆၂) ၊ပထမထပ်ရှိ လောကနတ်ပန်းချီခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။အဆိုပါလက်တွေ့ ရေးဆွဲထုလုပ်ရာတွင် ပန်းချီရွှေမြင့် နှင့် ကျော်ကျော်မင်း (ပန်းပု)တို့က နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင် မာမာအေး၏ ပုံတူပန်းချီပန်းပုများကို ရေးဆွဲထုလုပ်ကြသည်။ အဆိုပါအနုပညာလက်ရာလက်တွေ့ပန်းချီနှင့် ပန်းပုများကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်မှ မတ် ၂ ရက်နေ့ထိ ပန်းချီဆရာကြီး စတား ဦးမြသန်း၊ ပန်းချီဆရာကြီး ဦးဘဝင်း၊ ပန်းပုဆရာကြီး ဦးလွင်မောင်၊ ပန်းချီဆရာကြီး ဦးရောက်စီတင်ဦး၊ ပန်းချီဆရာကြီး ဦးလှမြင့်ဆွေ၊ ပန်းချီဆရာကြီး ဦးရှိန်ထွန်းတို့၏ ပုံတူပန်းချီ နှင့် ပန်းပု ဂုဏ်ပြုရေးဆွဲထုလုပ်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ တေးသံရှင် မာမာအေးသည် ရန်ကုန်မြို့မှ မတ်လတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ဆေးကုသမှုခံယူရန် ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိ၇သည်။Popular Journal
April 20, 2013, 09:02:08 PMReply #774 ---ThE Cr0w----
ကချင်ရိုးရာ သတို့သမီးအပ်နှင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တေးသံရှင် ရေဗက္ကဝင်း တေးသံရှင် ရေဗက္ကဝင်းက ချစ်သူ ဒေါက်တာ ကောင်းကျော်ဆွေ နဲ့ ဒီနေ့ ဧပြီ ၂ဝ ရက် မနက် ၉ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုနားဟိုတယ်မှာ ကချင်ရိုးရာ သတို့သမီးအပ်နှင်းပွဲကို ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တေးသံရှင် ရေဗက္ကဝင်းက ချစ်သူ ဒေါက်တာ ကောင်းကျော်ဆွေ တို့ဟာ မေလ ၅ ရက်နေ့မှာတော့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။Popular Journal
Image Hosting (Teashop)
File Hosting (Mediafire)
Zip and Image Hosting (ImageBam)
Design by Completevb. Adapted by Skinmod.